Lacagta Kaalmada Degdegga Ah Ee Koroona Faayrus - Springboard for the Arts
Lacagta Kaalmada Xaaladda Degdegga ah waa mid ay hal-abuurka/farshaxanka Minnesota ku caawineyso si ay uga soo kabsadaan xaaladda degdegga ah iyagoo isaga bixinaya kharashyada lamafilaanka ah. Maaddaama aan qeyb ahaan ka jawaabeyno xanuunka faafaya ee Korona faayrus/COVID-19, waxaan kor u qaadnay waxyaabo tixgelin mudan sida dakhli la'aanta ay sababteedu tahay baajinta gaar ah, fursado iyo ballamo cusub (sida khidmadaha, bakhshiishka shaqa-wanaagga, qandaraasyo) oo sababtuna waa in ay ahaato taxaddarka laga sameynayo Korona faayrus/COVID-19. Hal-abuur/farshaxan kasta waxa uu soo codsan karaa ilaa $500 oo ah lacag ay ka heli lahaayeen shaqo u qorsheysneyd balse ka baaqatay.
Wakhtiga la joogo lacag looma heli karo fursadaha mustaqbalka ama khasaaraha shaqo ee imaan kara. Springboard for the Arts waxay bixineysaa $10,000 oo dheeraad ah oo ka imaaneysa miisaaniyadda sannadkan si aan u taageerno dedaalkan annagoo ballan qaadeyna inaan meelo badan kala shaqeyno in la kordhiyo lacagta iyadoo loo eegayo baahida.
-Waxaan xoogga saareynaa baahiyaha lacageed ee fursadihii gebi ahaanba baaqday, mase aha kuwa dib loo dhigay oo keliya.
-Hal-abuurka/farshaxanka waxa ay soo dalban karaan fursadaha dakhligii ka lumay, balse ma aha wax la xiriira hal-abuurka/farshaxannimada oo keliya.
-Lacagtu waxay ku kooban tahay hal-abuurka/farshaxanka Minnesota.
-Haddii aad mar hore dalbatay, fadlan mar kale ha soo dalban. Waxaan ka shaqeyneynaa gebi ahaan codsiyadii na soo gaaray intii aan awoodno.
-Lacagaha Korona Faayrus/COVID-19, ma jiraan wax laga filayo oo ah dib-u-bixin ama xadeynta isticmaalkooda.
Waxaan aad ugu shaqeyneynaa sida ugu dhakhso badan ee macquulka ah ee aan dadka lacag ugu heli laheyn. Waxaan dadka u sheegeynaa in ay soo codsadaan, iyo inay ogaadaan inaan ula soo xiriireyno sida ugu habboon ee suurtagal ah.
Kala-sarrentii dhaqaale ee horay u jirtay awgeed waxaa sii xumaan kara dhibka jira oo ay dadkuna rabaan naf iyo nolol, balse waxaan ognahay inay dakhli la'aantu uga sii dareyso hal-abuurka/farshaxanka kuwoodii ay weligoodba xaaladdu ku xumeyd. Waxaan ka shaqeyneynaa sidii aan dadka lacagta aan hayno ugu kala hormarin karno si aan u yareyno kala-sarreyntii horay u jirtay. Arrintaas macnaheedu waa inaan mudnaan siineyno:
-Codsiyada hal-abuurka/farshaxanka ka soo jeeda isirka Madow, Dadkii Asalka Dhulkan, Dhaladkii hore iyo/ama Dadkaan Ahayn Caddaanka reer Yurub
-Codsiyada hal-abuurka/farshaxanka ku nool dhulka miyiga ah
-Codsiyada hal-abuurka/farshaxanka naafada ah, oo waxaa ku jira kuwa difaaca jirkoodu liito
-Codsiyada hal-abuurka/farshaxanka dookha jinsi kasta ee LGBTQIA+
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay qof kasta oo aan ka helnay deeq aan ku darnay Lacagta Samafalka Degdegga ah. Haddii aad deeq noogu tabarrucayso, fadlan isticmaal linkigan: https://www.givemn.org/story/Epf3ag
Waxaa sidoo kale fikrad nagu dhaliyey oo aan gallad u haynaa dad badan oo jooga dalka iyo dunida meel kasta oo lacagta xaaladaha degdegga ah u diyaarinaya hal-abuurka/farshaxanka. Waxaan diyaarineynaa agab iyo qalab aan ku caawineyno dadka ku sugan meelaha kale si ay u sameystaan lacagta xaaladaha deggdegga ah oo waxaan barta intarnetka ku uruurineynaa liis lacageed oo joogto ah. Ka eeg liiska macluumaadka xaaladaha degdegga ah halkan: https://springboardforthearts.org/coronavirus/emergency-relief-fund-resources/
Fadlan isticmaal foomkan si aad u soo codsato
Questions about this Fund?
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay qof kasta oo aan ka helnay deeq aan ku darnay Lacagta Samafalka Degdegga ah. Haddii aad deeq noogu tabarrucayso, fadlan isticmaal linkigan.
Macluumaadyo gaar ah
Waxaan diyaarineynaa agab iyo qalab aan ku caawineyno dadka ku sugan meelaha kale si ay u sameystaan lacagta xaaladaha deggdegga ah oo waxaan barta intarnetka ku uruurineynaa liis lacageed oo joogto ah